प्रचण्डले ओलीलाई पठाएको पत्र किन विवादित ?
३० कात्तिक,नेपालदृष्टि । नेकपाका दुई अध्यक्षबीच चर्किएको विवादमा अन्य नेताहरु पनि बोल्न थालेका छन् । सचिवालयमा भने प्रचण्डकै पक्षमा धेरै नेता उभिएका छन् ।
प्रचण्डले ओलीलाई विभिन्न आरोपसहित पत्र पठाएपछि विवाद चर्केको छ । तर, सचिवालयका नेताहरुले सो पत्र उचित रहेको भन्दै प्रचण्डको पक्षमा उभिएका छन् । झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमले समेत प्रचण्डको बचाउन गरेका छन् । पाँच नेताबीच सल्लाह गरेर नै सो पत्र ओलीलाई पठाइएको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेता खनालले कसैले धम्की दिदैमा प्रचण्डद्वारा अघि सारेको प्रस्ताव फिर्ता नहुने बताएका छन् । विवाद मिल्न ओली सच्चिनुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ ।
प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव प्रचण्ड एक्लैले नभई सचिवालयका पाँच सदस्यले सामुहिक रुपमा ल्याएको नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले स्पष्ट पारेका छन् ।
सचिवालय वैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव प्रचण्डको ‘एकल प्रस्ताव’ भएको दावी गर्दै फिर्ता लिन ओली निकट नेताहरुले आग्रह गरिरहेका बेला उपाध्यक्ष गौतमले यस्तो बताएका हुन् । उपाध्यक्ष गौतमले शुक्रबारको सचिवालय बैठकमा पेश गरेको प्रस्ताव प्रचण्ड एक्लैले नल्याएको प्रष्ट पारेका हुन् ।
उक्त प्रस्तावलाई केपी ओली पक्षधरका केही नेताहरुले प्रचण्डले फिर्ता लिनुपर्ने भनेर दावाव बढाइरहेका बेला गौतमले सो प्रस्ताव प्रचण्डसहित पाँच नेताको छलफल र सहमतिमा तयार भएको बताएका हुन् ।
गौतमले उक्त प्रस्ताव पार्टी ध्वंश गर्न नभई प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सच्याउनका लागि आएको पनि बताएका । ‘त्यो प्रस्ताव ध्वंश गर्न हैन, केपी कामरेडलाई सच्याउनका लागि आएको हो । उहाँ सच्चिनु बाहेक नेकपासँग अर्को कुनै समाधान छैन’, गौतमको भनाइ छ । उता प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । - दृष्टि न्यूज
लक डाउनको समयमा के गर्न सकिन्छ ?
किन समय अनुसार रंगेलीको बिकास हुन सकेन ?(भिडिया सहित)
अहिले नेतामा जनता र कार्यकताको मतलव नै छैन (भिडियो सहित)
१० जनाको शव फेला, ४१ जना बेपत्ता
वल्लो किनारमा म जन्मिएँ–तिलस्मी प्रमोद